China 330kV okpukpu abụọ akaghị Y-ụdị akara ụlọ elu rụpụta na ụlọ ọrụ | XY Tower
330kV abụọ akaghị Y-ụdị akara ụlọ elu
XY Group bụ ụlọ ọrụ nwere ogologo akụkọ ihe mere eme. Ná mmalite nke afọ 2000, Azụmaahịa kachasị nke ụlọ ọrụ ahụ na-ere ngwa ngwa eletriki na nke telecom dị ka waya eletriki na eriri, onye ntụgharị, ngwaike ngwaike, mgbanwe ụlọ ọrụ, akara elu wdg. N'etiti Afọ 2001 na Afọ 2008 ， anyị nyere ụdị akụrụngwa maka ọtụtụ narị ndị ahịa n'ofe mba ahụ. N'ime oge ahụ, XY Group malitere inweta ntụkwasị obi nke ndị ahịa n'ihi ngwaahịa na ọrụ ọrụ dị mma. Ahụmịhe azụmaahịa azụmaahịa na-ewetakwa XY Group ike ị nweta ike karịa ndị asọmpi anyị.
N’afọ 2008, e guzobere XY Tower nke lekwasịrị anya n’ichepụta ụlọ elu igwe. XY Tower enwetawo uru site na ndị ahịa ahịa zuru oke na usoro ntinye siri ike nke otu, mmepe nke XY Tower bụ ngwa ngwa n'afọ ndị na-adịbeghị anya. Naa, XY Tower na-enye karịa 1000 tent ígwè ụlọ elu kwa afọ. Ndị ahịa ahụ na-ekpuchi ihe karịrị mpaghara 20 nke China na ahịa ahịa. XY Tower bụ onye ruru eru nke ọtụtụ mba 500 otu gụnyere grid steeti, gird south 、 China Energy Engineering Group, China telecom 、 Huawei wdg.
Nke gara aga: 330kV okpukpu abụọ akaghị ụlọ elu
Osote: 330kV otu akaghị Y-ụdị nnyefe ụlọ elu